ထိပ်တန်း5လူဇင်ဘတ်ရန်တစ်ဦးက Short ခရီးစဉ်တွင်လုပ်ဖို့အမှုအရာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5လူဇင်ဘတ်ရန်တစ်ဦးက Short ခရီးစဉ်တွင်လုပ်ဖို့အမှုအရာ
လူဇင်ဘတ်စီးတီး ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်အတူ coupled ရှေးခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်တစ်ခုမှော်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်, ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် ဇိမ်ခံ. ဤသူအပေါင်းတို့အမျိုးစုံရ options များနှင့်အတူဆိုဘေးကင်းလုံခြုံဒါဟာင်, သငျသညျပျင်းရင့်ခြင်းမရှိအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုသာအမည်ရန်အဘို့အခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့် ထိပ်တန်း5လူဇင်ဘတ်မှတိုတောင်းတဲ့ခရီးစဉ်လုပ်ဖို့အမှုအရာ. ဒါပေမဲ့, ကျနော်တို့ကသွားလာရင်းပေးလိမ့်မယ်!
1. သမိုင်း, အတတ်ပညာ & ယဉျကြေးမှု
ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့သမိုင်းတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရောစပ်ကမ်းလှမ်း, ယဉျကြေးမှု, အနုပညာနှင့်သဘာဝ ရှုခင်းများ. ဥရောပသမဂ္ဂရုံးများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများစွာသောလူဇင်ဘတ်စီးတီးအတွက်တည်ခင်းဧည်နှင့်အတူ, ဤမြို့ကိုတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ရှိ.
ယင်း၏မြောက်မြားစွာပြပွဲနှင့်ပြတိုက်နှင့်အတူ, ရဲတိုက် နှင့်ခံတပ်, လူဇင်ဘတ်အနေနဲ့ပေါင်းစပ် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမျိုးမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာများကို. လူဇင်ဘတ်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာက၎င်း၏လူဦးရေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများမှာ, ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု. လူဇင်ဘတ်ကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများအမျိုး၏မာနပြပွဲမှအနုပညာနှင့်အစဉ်အလာကနေကွဲပြားစေခြင်းငှါနဲ့ ပွဲတော်များ. လုပ်နိုင်ရန်အတွက် သငျသညျရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အလွယ်ကူစေရန် လူဇင်ဘတ်ထဲမှာအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်လူဇင်ဘတ်ဟာ created လူဇင်ဘတ်ကတ်: ထက်ပိုပြီးအခမဲ့သုံးစွဲနိုင် 60 လူဇင်ဘတ်နှင့် သာ. ကွီးမွတျဒေသကြီးအတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှုသောနေရာများ.
ယင်းထိပ်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်5လူဇင်ဘတ်မှတိုတောင်းတဲ့ခရီးစဉ်လုပ်ဖို့အမှုအရာ, သငျသညျကျိန်းသေမှ L သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်စီးတီးပြတိုက်တွင် etzebuerg. ပြတိုက် လေးသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦ၌ကျိန်းဝပ်နေသည်. အဆိုပါအမြဲတမ်းပြပွဲ "ဒီလူဇင်ဘတ်ပုံပြင်" ဟုဂရန်း Duchy ၏မြို့တော်များ၏ထက်ပိုတထောင်နှစ်သမိုင်းသရုပ်ဖော်. အများအပြားမူရင်းအရာဝတ္ထုမှနောက်တစ်ခု, ပြပွဲမြို့ပြမော်ဒယ်များတစ်စီးရီးသုံးပြီးမြို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတင်ဆက်. ယာယီပြပွဲပြတိုက်နှစ်ခုနဲ့အခြားအဆင့်ဆင့်အပေါ်မှန်မှန်ကျင်းပကြသည်. သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ!
Casemates du Bock ဟောင်းရဲတိုက်အောက်အတော်လေးအလွယ်တကူများမှာ, Montee က de Clausen. အဆိုပါ Bock Casemates တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 17 ကီလိုမမီတာ ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ကနဦးကကျောက်ထဲကထု စပိန် အကြား 1737 နှင့် 1746. အဆိုပါ casemates လူဇင်ဘတ်ရှိ၎င်း၏သမိုင်းဝင်အရေးပါမှုလူသိများကြသည်, ထက်ပိုပြီးများအတွက်အမိုးအကာဖြစ်ခြင်း 35,000 ယင်းပထမကမ္ဘာစစ်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းစစ်သားဒေသခံများထောင်နှင့်ချီ. လေထုကျမ်းပိုဒ်များနှင့်အထင်ကြီးရော့ခ်လှေကားပါဝင်သည်ဟု, Casemates ၏သမိုင်းဝင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ. သူတို့အားဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းခြင်းနှင့် ကြောင်းအိတ်ထုပ်ပိုး. ဒါဟာသင့်ရဲ့ထိပ်တန်းအပေါ်တစ်ဦး-တွေ့မြင်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်5လူဇင်ဘတ်မှတိုတောင်းတဲ့ခရီးစဉ်လုပ်ဖို့အမှုအရာ!
ဘာသာရေးအမွေအနှစ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့ Quirinus Chapel သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်. အတွင်းစိုက်ထူတစ်ဦးက Gothic ဘုရားဖူး Chapel 1355 နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျောက်၌ထွင်း. ယင်း၏ site ပေါ်တွင်, တစ်ဦးကိုမူလကရှိခဲ့ တပါးအမျိုးသားတို့သည်နတ်ကွန်း သောရောမအကြာတွင်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်သန့်ရှင်းရာဌာနအဖြစ်ကိုးကွယ်လျက်. တစ်ဦးကရော့ခ်အရင်းအမြစ်ကဒီမှာ surges. ပြည်သူ့မျက်စိဝေဒနာတွေ၏အမှု၌၎င်း၏ရေပိုင်နက်အတွင်းတစ်ဦးအကျိုးရှိသောတင်နိုင်ပါဝါ ascribed.
11 ရာစုကတည်းက, ဆိုက်စိန့် Quirin နှင့် 13 ၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. သန့်ရှင်းစေခဲ့ပြီး, ဝန်ဆောင်မှုများ Chapel ၏နှစ်ခုလိုဏ်ဂူတွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်.
အဆိုပါ Gothic အဘိဓါန်ဘုရားဖူး Chapel အတွက်စိုက်ထူခဲ့သည် 1355, ခေါင်မိုးနှင့်အသေးစားခေါင်းလောင်း-တာဝါတိုင်နောက်မှဆက်ပြောသည်စဉ်တွင်, 19 ရာစုအကုန်မှာ.
စိန့်မိုက်ကယ်ရဲ့ဘုရားကျောင်းလူဇင်ဘတ်ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်၏ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကျော်မြို့နှင့်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်. စိန့်မိုက်ကယ်ရဲ့ဘုရားကျောင်းလူဇင်ဘတ်ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဘာသာရေးအဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်တယ်. အဆိုပါအဆောက်အဦရဲ့ သမိုင်း နောက်ကျောမှရက်စွဲများ 1987 လူဇင်ဘတ်၏အရေအတွက်ကသူ့ရဲတိုက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံအတွင်းသေးငယ်တဲ့ Chapel စိုက်ထူသည့်အခါ. ပစ္စုပ္ပန်ဘုရားကျောင်း Gothic အဘိဓါန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒြပ်စင်များနှင့်ဘားရို့အတွင်းပိုင်းအလှဆင်နှင့်အတူတစ်ဦး Romanesque မျက်နှာစာပေါင်းစပ်. အဆိုပါ nave အတွက်ချွန်မုတ်သတိထားမိ. အကြီးစားစွန်းဖန်ပြတင်းပေါက်. ဘာသာရေးပန်းပု၏အရေအတွက်ကို. ထိုအခါဗာဂျင်းပန်းချီ၏ကြီးမားသော Assumption အဆိုပါဘားရို့ကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထား.
4. လူဇင်ဘတ်မှတိုတောင်းတဲ့ခရီးစဉ် Palais က Grand-Ducal
အကယ်. ဗိသုကာအတတ်ပညာ သင့်ရဲ့အရာဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက် Palais က Grand-Ducal ထိပ်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်5လူဇင်ဘတ်မှတိုတောင်းတဲ့ခရီးစဉ်လုပ်ဖို့အမှုအရာ. ယင်းက Grand Duke ၏မူလနေထိုင်ရာနှင့်တော်ဝင်မိသားစုအဖြစ်, ဂရန်း Ducal နန်းတော် လူဇင်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိသုကာတစ်ဦးအံ့မခန်းအပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ Flemish Renaissance ကာလအတွင်း 16 ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ထား. နန်းတော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစတိုင်များအမျိုးမျိုး၏လက်ရာမြောက်သောပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်လာသော. အကြားတစ်ဦးကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆက်စပ်မှုတွေ စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော နှင့်အလယ်ခေတ်-Gothic စတိုင်, ကနှင့်စက်မှုအလင်းဒီဇိုင်းများ ဂျာမန် စက်မှုဒီဇိုင်နာ – INGO မစ္စတာ Maurer.
လူဇင်ဘတ်ရှိအချောကလက်အိမ် သင်တန်းက၎င်း၏ချောကလက်များအတွက်လူသိများသည်. သို့သော်ချိုမြိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်အမျိုးမျိုးကိုမှတပါး, သင်သည်လည်း၎င်းတို့၏ savory pies ပျော်မွေ့နိုင်ပြီး သုပ်. ကျန်ကြွင်းသောအရပ်အပြည့်အဝဖြစ်တဲ့အခါ, သင်အမြဲမြေညီထပ်သို့မဟုတ်အပေါ်ထပ်အပေါ်အတွင်း၌ထိုင်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါချောကလက်အိမ်ဟာဂရန်း Ducal များ၏ရှေ့မှောက်၌တည်ရှိသည် နန်းတော်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကိုယူပြီး Hotchocspoon ပျော်မွေ့. ငါတို့သည်သင်တို့ချောကလက်အိမ်သင်အကြိုက်ဆုံးနေရာစေမည်သေချာ. တစ်ဦးမမေ့နိုင်သော, နှိုငျးမဲ့အတွေ့အကြုံကို, အားလုံးအရေအတွက်ပေါ်.
ပျော်စရာတစ်ခုအပိုငွေပမာဏများအတွက်, အဆိုပါလက်လွတ်မ နွေရာသီ အဆိုပါ City Festival ၌. ဒါဟာစက်တင်ဘာလ၏အစအဦးသည်အထိဇွန်လကုန်ကနေရာအရပ်ကိုကြာ. သင်သည်တတ်နိုင်ဤကာလအတွင်း အခမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲပျော်မွေ့, စျေးကွက်, ပြပွဲနှင့်အားကစား အပျက်တစ်လျှောက်လုံးမြို့.
သုံးပြီးလူဇင်ဘတ်မှရထားကိုဖမ်း SaveATrain! ဥရောပတစ်ဝှမ်းကသင်၏ Adventures စာအုပ်ဆိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးရာအရပျ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-things-short-visit-luxembourg%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / TR ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#shorttrips #top5thingstodo #topthingstodo #toptips လူဇင်ဘတ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဂရိနိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား